Puntland Archives - Sawirrotv
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay Xuska 20-sano guurada Puntland (SAWIRRO)
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay ka qayb galay munaasabadlagu xusayay 20-sano guurada maamul-gobaleedka Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta Puntand, Ra’iisul wasaare Khayre ayaa Shacabka iyo madaxda Puntland ku ammaanay dawlad jacayl, midnimo, horumar dhaqaale, ilbaxnimo, cirib tirka burcad badeedda iyo la dagaalanka Daacish iyo Shabaab. “Aniga oo ku hadlaya magaca …
Saaka Aroortii hore ayaa waxaa dagaal xoogan uu ka qarxay deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool, kaasi soo u dhaxeeya ciidamo halkaasi isku horfadhiyay oo ka kala socda maamuladda Puntland iyo Soomaaliland. Dagaalka ayaa la sheegayaa in uu ka qarxay saldhig ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihin duleedka deegaanka Tukaraq, wararka ayaa waxa ay intaasi ku daraya …
Puntland oo Sheegtay Inay Gacanta ku Dhigtay Dadkii ka Danbeeyay Qaraxii Deegaanka Af Urur
Maamulka Puntland ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay deegaanka Af Urur ee Gobolka Bari. Qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Puntland iyo dad shacab ah, kadib markii qaraxyada la galiyay goob jaadka lagu iibiyo, xilligaasi oo ay ku xoonsanaayeen ciidamo badan oo …
Ururka Al Shabaab oo soo Bandhigay Sawirrada Dagaalkii Af-Urur ee Puntland (SAWIRRO)
Ururka Al Shabaab ayaa maanta soo bandhigtay sawioro iyo muuqaal laga soo qaaday Weerarkii dhawaan ee ku qaadeen xereda ciidanka Daraawiishta ee maamulka Puntland ku lahaa Deegaamka Af-Urur ee gobolka Bari. Ururka Al Shabaab ayaa sheegay in weerarkan ay ku dileen in ka badan 60 askari oo katirsanaa Ciidamada Puntland, waxa ay sidoo kale sheegeen …
Puntland oo War Saxaafadeed ka soo Saartay Weerarakii Al shabaab ee Tuulada Af-urur
Wasiiradda maamulka Puntland oo maanta shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa isla falanqeeyey dagaalkii xili hore oo saaka ah ku dhexmaray Ciidamadda Puntland iyo xoogaga Al-shabaab tuulada Af-urur ee degaanka Galgala ee gobolka bari. War-saxaafadeed ka soo baxay shirkani ayay Puntland ku sheegtay in ciidamadeedu ay iska caabiyeen weerarkaasi, hase yeeshee Al-shabaab ay …
Ciidamada Puntland oo Gacanta ku soo Dhigay Gaari Laga soo Buuxiyay Waxyaabaha Qarxa & Ragii Waday (VIDEO)
Ciidamada maamulka Puntland ayaa soo bandhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ay gacanta ku soo dhigeen ragii waday, kaas oo ay doonayeen inay gudaha u galiyaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland. Gaariga ay ciidamada Puntland qabteen oo ahaa nuuca xamuulka qaada ayaa waxaa saarnaa waxyaabaha qarxa oo kala duwan, gaarigan …
Madaxweyne Gaas oo ka Hadlay Wixii ka soo Baxay Shirkii London (Dhagayso)
Madaxweynaha Maamulka Puntland mudane, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa faah faahin ka bixiyay waxyaabihii ka soo baxay shirkii shalay ka dhacay Magaalada London. Shirkan oo diiradda lagu saaray arrimaha Soomaaliya, ayaa waxaa shir guddoominayay Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’iisal Wasaaraha Ingariiska iyo Xoghayaha Guud Qaramada Midoobey, waxaana ka qaybgalay afartan dal oo daneeya arrimaha Soomaaliya iyo hay’adaha …